Ova-matoanteny - Wikipedia
Ny ova-matoanteny dia endriky ny matoanteny izay sady afaka mitana ny anjara asan'ny matoanteny no afaka mitana ny anjara asan'ny mpamari-toetra.
1 Filazam-potoana sy fanehoan-javatra
1.1 Filazam-potoan'ny ova-matoanteny
1.2 Ova-matoanteny enti-mamorona endri-pilazam-potoana
2 Ova-matoanteny sy fiendrika
2.1 Fiendriky ny ova-matoanteny
2.2 Ova-matoanteny ampiasaina hahazoana fiendrika
3 Ova-matoanteny ao amin'ny fiteny rosiana
3.1 Ova-matoanteny ankehitriny manano
3.2 Ova-matoanteny lasa manano
3.3 Ova-matoanteny ankehitriny anoina
3.4 Ova-matoanteny lasa anoina
Filazam-potoana sy fanehoan-javatraHanova
Ao amin'ny fitsipiteny mahazatra dia anarany fotsiny ny filazana ny endriky ny ova-matoanteny ho manana filazam-potoana. Amin'ny ankapobeny, na ny "ova-matoanteny ankehitriny" na ny "ova-matoanteny lasa" dia tsy milaza fotoana fa milaza fanehoan-javatra: ny ankehitriny ho an'ny fanehoan-javatra tsy efa fa ny lasa ho an'ny fanehoan-javatra efa.
Ny ova-matoanteny ankehitriny ao amin'ny fiteny frantsay dia miafara amin'ny -ant (ohatra: marchant, parlant, mangeant, perdant, finissant) fa ny ova-matoanteny lasa kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny (ohatra: marché, parlé, mangé, perdu, fini).
Ny ova-matoanteny ankehitriny ao amin'ny fiteny anglisy dia miafara amin'ny -ing (ohatra: walking, speaking, eating) fa ny ova-matoanteny lasa kosa dia manana endrika isankarazany arakaraka ny matoanteny (ohatra: walked, spoken, eaten).
Amin'ny fiteny sasany toy ny fiteny latina dia misy koa ny ova-matoanteny hoavy, ankoatry ny ova-matoanteny ankehitriny sy ny ova-matoanteny lasa ka azo raisina ohatra ny hoe morituri ("ireo izay ho faty") izay ova-matoanteny hoavin'ny hoe morire ("maty").
Ova-matoanteny enti-mamorona endri-pilazam-potoanaHanova
Ao amin'ny fiteny sasany dia ampiasaina miaraka amin'ny matoanteny andry ny ova-matoanteny mba hahazoana ny filazam-potoana na/sy ny fanehoan-javatra sasany.
Ao amin'ny fiteny frantsay dia ampiasaina miaraka amin'ny matoanteny mpanampy avoir (na être) ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny fanehoan-javatra efa toy ny lasa tambatra (frantsay: passé composé) sy ny lasan'ny lasa (frantsay: plus-que-parfait) sns.
Ao amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina miaraka amin'ny matoanteny mpanampy have ny ova-matoanteny lasa (-ed sns) mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny fanehoan-javatra efa toy ny filazam-potoana ankehitriny efa (anglisy: present perfect) sy ny filazam-potoana lasa efa (anglisy: pluperfect na past perfect) sns.
Ao amin'ny fiteny anglisy ihany dia ampiasaina miaraka amin'ny matoanteny mpanampy be ny ova-matoanteny ankehitriny (-ing) mba hahazoana ireo filazam-potoana amin'ny fanehoan-javatra mitohy toy ny filazam-potoana ankehitriny mitohy (anglisy: present continuous) sy ny filazam-potoana lasa mitohy (anglisy: past continuous) sns.
Ova-matoanteny sy fiendrikaHanova
Fiendriky ny ova-matoantenyHanova
Ao amin'ny fiteny sasany misy an'io endri-matoanteny io dia misy karazany roa ny ova-matoanteny raha ny fiendrika no resahina, dia ny atao hoe ova-matoanteny mañano sy ny ova-matoanteny anoina.
Amin'ny fiteny frantsay, ho an'ireo matoanteny mihatra dia amin'ny fiendrika manano ny ova-matoanteny ankehitriny (ohatra: La fille chantante) fa amin'ny fiendrika anoina kosa ny ova-matoanteny lasa (ohatra: Les chansons chantées). Torak'izany koa ny miseho amin'ny fiteny anglisy, ho an'ireo matoanteny mihatra dia amin'ny fiendrika manano ny ova-matoanteny ankehitriny fa amin'ny fiendrika anoina kosa ny ova-matoanteny lasa.
Ova-matoanteny ampiasaina hahazoana fiendrikaHanova
Ao amin'ny fiteny sasany koa dia ampiasaina miaraka amin'ny matoanteny mpanampy ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ny fiendrika anoina mifandraika amin'ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano. Ao amin'ny fiteny frantsay dia ampiasaina ny matoanteny mpanampy être ampiana ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ny fiendrika anoina. Ao amin'ny fiteny anglisy dia ampiasaina toy izany koa ny matoanteny mpanampy be ampiana ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ny fiendrika anoina.
Ova-matoanteny ao amin'ny fiteny rosianaHanova
Ao amin'ny fiteny rosiana dia miavaka tsara ny filazam-potoana sy ny fiendrika raha ny ova-matoanteny no resahina, ka misy ny ova-matoanteny ankehitriny manano sy ny ova-matoanteny ankehitriny anoina sy ny ova-matoanteny lasa manano ary ny ova-matoanteny lasa anoina. Ankoatr'izany dia mifandrindra amin'ny filaza isa sy ny kilahivavy ny ova-matoanteny rosiana.
Ohatra: matoanteny чита́ть ("mamaky")
Ova-matoanteny ankehitriny mananoHanova
Ova-matoanteny lasa mananoHanova
Ova-matoanteny ankehitriny anoinaHanova
Ova-matoanteny lasa anoinaHanova
прочитанный ("novakina") (tsy maintsy matoanteny mifetra).
Ireto misy fehezanteny atao ohatra;
Де́вушка, чита́ющая тут кни́гу, – моя́ сестра́ ("Ilay zazavavy mamaky an'ity boky ity dia anabaviko") (Ova-matoanteny ankehitriny manano).
Де́вушка, чита́вшая тут кни́гу, забы́ла свой телефо́н ("Nanadino ny findainy ilay zazavavy namaky an'ity boky ity") (Ova-matoanteny lasa manano).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ova-matoanteny&oldid=1000654"
Dernière modification le 25 Janoary 2021, à 12:28
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2021 amin'ny 12:28 ity pejy ity.